(WARLORD) KA QUDHA EE KU HADHAY SOMALILAND IYO SOMALIS. | Burco Media
Waxaynu ku jirnaa 2017 haddaynu Somaliland nahay dunidoo dhami way ina soo eegayaan maxaa waxay wadankeena ilaahay meel qaali ah ayuu ka dhigay (strategically) inaguna dunidaynu eegaynaa si aynu ictiraaf u helno. Hadda waxaa inagu soo dhaw doorasho ay u tartamayaan laba xusbi labada xusbi waxaa muuqata inay kala hogaaminayaan laba nin oo aad u kala duwan oo mid yahay Diplomacy qaali ah oo ay ka muuqdaan sifooyinkii hogaamiye oo dhami. HOGAAMIYE waa hage, waa badbaadshe, waa balaadhshe, waa bidhaanshe, waa isku tole, waa geed hadhweyn oo lagu hirto. Dunidu waxay ku maahmaahdaa QOON HOGAAN XUN IYO QOYS HOOYO XUN MIDNA MA HANO QAADO. Hogaamintu waxaa la yidhi waa waxa duni loogu hadalhaynta badan yahay looguna fahanka yar yahay. Waxaa kaloo la yidhaa Hogaamiyaa wacani wuxuu soo saaraa Hogaamiyayaal wacwan maanta haddaad yara dhugato saaxadda masraxiyadda siyaasadda ee Somaliland Hogaamiye Cirro wuxuu markiiba helay Hogaamiyeyaal qaali ah ugu horeeyo Hirsi H Cali, Axmed Caydiid Moxamed Biixi ,Buubaa, Timo cadde Ismail yare, haldoor ka qaanuune yahanka ah iyo qaar kaloo badan waa waxa wadankoo dhammi ugu ququlayo Xisbiga Wadani.
Dhinaca kale waxaa la tartamaya Muse Biixi oo xaq u leh inuu wadankiisa ka tartami karo laakiin ay ku gadaamantay si cad inuu yahay WARLORD KA QUDHA EE GEESKA AFRIKA KU HADHAY. Dadkoo dhammi arintaa way caddeeyeen Mudane Ismaciil yare ayaa daaqad ina tusay run badan oo dulmiya oo Muse Biixi dadkii ugu dhowaa xittaa ku hayo isagoon weli gaadhin kursigii uu wadanka ku baabiin lahaa. Wuxuu Ismaciil yare caddeeyey inuu ninkaasi wadanka soo galay isagoo mucsur qaawana laakiin wata ciidan dhalin wax ma garato ah, dabadeed uu boob iyo dagaal ku qaaday dhulkii hantida guud iyo dhulal badan oo dad caadiyi leeyihiin illaa maantana uu ciidan xoolahaa ku haysto oo warlord nimadiisu weli (active) tahay madaxweynuhuna ogyahay ee uu wadanka u tudhayo. Ninkaa Muse si cad baa (Discriminations and Prejudices ) kiisa aanu u qarsan. Isagoon meel na madax ka ahayn buu dadka xidhxidhaa oo xukuumaddu ka baqataa . Xisbiyadu waa isku taal xukuumadu waa wax la wada leeyahay hadana waxbaa siya. Reer Somaliland iyo Xukuumadu maantay fursad haystaan inay Muse oo hanti aanuu habeen shaqaysan xoog ku boobay oo boqolaal caailadood iyo dantii guud ka daba ooyayaan inay kursiga ummadda uu ku layndoono dadka loogu dhiibaa waa shay farta dhexda laga qaniini doono.
Haddaan sheeko yar idin xasuusiyo: Afweyne dilka, muaamaradda iyo dilka dadka muu bilaabin markuu kursiga inqilaabay ee wado dheer buu soo maray oo uu dad soo laayey. Ugu horayn ninkii Masriga ahaa ee UN ku u soo diray 1950gii si uu usoo diyaariyo gobonimada somalia, KAMAAL DIIN SAALAX APRIL 16 1957 waa dilay waxaa dilay hadhcad suuqa xamar dhexdiisa Mohamed Siyaad Barre oo booliiska u sareeyey xamar iyo nin madaxa oo Talyani ah (Presco) iyo Weyrax Laangadhe, waxaanay u soo direen nin Wiilaw la odhan jiray oo midi weyn u soo dhiibeen, KAMAAL DIIN WAXAY UN KU U SOO DIREEN SI UU SOLMALIA UGU SOO DHISO INSTITUTTIONS KA DAWLADEED SI AY 1960 iyagu ula wareegaan dawladnimadooda.Cabdirashiid Cali Sharma arke Afweynaa dilay iyo qaar kaloo badan. Markaa ninka madax noqonayaa waa in dib raadkiisa iyo waxa uu ku dhexjiro aad looga fiirsadaa. Muse waa (disqualified) inuu wadankan hogaamiyaa khatar badan baa ku daba gabbanaysa oo la eedi doono.yaan caadifadi idinqaadin dadka Muse leh waanu u foodaynaayeenaw.